Ngaba iMithombo yeendaba yeNtlalontle inyanzelisa abathengisi ukuba bakude neMedia Media? | Martech Zone
Lwesine, ngoFebruwari 16, 2017 Douglas Karr
Le yinto entle ebalisa nge-infographic evela kwiNtlalontle yeNtlalontle eneziphumo ezinzulu kunokuba abathengisi banokuvuma ukwamkela. I-infographic ibizwa Iindlela ezi-6 zoLuntu lwezeNtlalontle eziya kuthatha indawo ngo-2017 kwaye uhamba kwisitishi ngasinye seendaba zentlalo, indlela yokuziphatha kwabathengi etshintsha ngayo, kunye nokuqhubela phambili kwetekhnoloji njengobukrelekrele bokuzenzela.
Idityaniswe nevidiyo efunwayo, ubuchwephesha bokuthintela intengiso, kunye nokukhula kwe-1: Iitshaneli ze-1 ezinje ngeSnapchat kunye nabathengisi kufuneka baqwalasele kwakhona ibhetshi yabo kunye nokuqhushumba kwentengiso ebandakanyekayo kunyaka ngamnye. Umthengi unamandla ngoku okufumana oko bakufunayo, xa bekudinga, apho bafuna khona, ngexabiso abalifunayo. Izinketho zokunciphisa iinkampani zibonisa ukutyalomali kumava abathengi kunye nokwakha ubudlelwane ngokuthe ngqo.
Nokuba kubudlelwane beshishini ukuya kwishishini, Intengiso esekwe kwiakhawunti uqhuba iziphumo. Ngelixa intengiso ebanzi ingafanga, kujoliswe kuyo, izicwangciso ezizezakho eziqala ukuqhuba uhambo lwabathengi- hayi iintengiso ezifakwe kuyo yonke indawo ezingayijonganga.
Imithombo yeendaba yeNtlalontle ye2017
Iilensi ze-AI ze-Facebook kunye ne-Instagram -Okunye ukufana kwe amava okuxelwa kwangaphambili isenokuba kukufutshane kuFacebook, kodwa andiqinisekanga ukuba izinja ze-AI ziya kukhutshwa kweli nqanaba kuhambo lwethu lweendaba zentlalo. Ndiyarhana ukuba ukusetyenziswa kokuqala kuya kuba kukutshatisa iintengiso kunye nezinto ezithandwayo ezibonakalayo.
Iinkonzo zeNgcaciso zeeNkonzo zabaThengi -Kuba isidingo sobuhlobo kunye ne-1: 1 ubudlelwane buza kukhula, ngombulelo kukho ubuchwepheshe obuya kunceda ukunciphisa izixhobo eziyimfuneko ukufezekisa iziphumo eziphezulu. Iincoko zinokusetyenziselwa ukubonelela ngolwazi oluneenkcukacha ngendlela yokuncokola engacimi abathengi okanye amashishini- onke ngelixa esonyusa amazinga okuguqula kunye nokunceda iindwendwe.
Umxholo ohlawulelweyo uyaqhubeka nokuBusa -Ukuba kukho into enye abathengisi abayiqondayo kukuba imithombo yeendaba zentlalo yakha ibhulorho phakathi kweemveliso kunye neenkonzo kunye nabathengi okanye amashishini ofuna ukubafumana ngaphambili. Njengoko amaqonga eendaba ezentlalo akhula ephucukile, uyazi ukuba ibhulorho iya kubiza kakhulu!
Okuphambili kwizinto zeShishini kunye noHlahlelo - Andiqinisekanga ukuba Iimbonakalo ichanekile- ndiyakholelwa ukuba izibonelelo, ixabiso, kunye namava kulapho imithombo yeendaba zentlalo izakuqhuba ukubandakanyeka, ukufumana, ukugcina, kunye nokunyusa ixabiso lobudlelwane bethu nabathengi bethu. Uhlalutyo luyimfuneko koku - kodwa ndingakhetha amava alula asebenzayo ngaphandle kokongeza ubuninzi beempawu ezingenangqondo.
Shenxisa kude kuZenzekelayo -Ndiyinto yokuthandabuza koku. Ngo-2017, abathengisi baya kufuna yonke i-automation abanokuyiphatha ukufezekisa iziphumo eziphezulu ngezixhobo ezincinci. Nangona kunjalo, ndiza kuthetha ukuba kufuneka ibe zizixhobo ezintsonkothileyo ezimameleyo, zokwahlulahlula, ezizezakho, kunye nokuqikelela ukubandakanyeka okulandelayo kwi-Intanethi kusetyenziswa imidiya yoluntu.
Ukuthenga kweNtlalo kunye nokuthenga kwangoko Kunye nesakhono sokuthenga ngokulula, ukunikela, okanye ukuthumela izipho, ukusebenzisa umxholo oveliswe ngumsebenzisi kuya kuba sisiqhelo esikhulayo. Siza kwabelana ngeposi malunga Stackla Kungekudala iyamangalisa, inyusa amaxabiso okuguqula ngamanye amaxesha ama-30% kwezinye iimveliso.
Akuthandabuzeki ukukhula nokukhula kwimithombo yeendaba kwezentlalo ngo-2017. Ngelixa amashishini eqhubeka nokuzabalaza - kuphela iipesenti ezingama-34 zamashishini amancinci asebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ukuzibandakanya nokuthetha nabathengi, phantse isinye kwisithathu sabo bonke abathengi bathi ubukho bentengiso yohlobo esona sizathu sokuzama iimveliso ezintsha okanye iinkonzo. Kwaye iipesenti ezingama-57 zabathengi kunokwenzeka ukuba bathenge kwi-brand abayilandelayo
tags: Iindlela ezingama-2017kwi-infographicamaphulo entlalontleintlalontle elandelayoImidiya yokuncokola ezenzekelayokwimidiya yoluntuiindlela zosasazo lwasekuhlaleniImithombo yeendaba zentlalo 2017ubukho ekuhlaleniukuthengisa kwezentlaloUkuthenga ezentlaloukuhluma kwezentlaloiintsingiselo
Imibuzo emi-5 yokubuza uMcebisi ngeNjini yakho yoKhangelo